लाबारिश गर्ल - ५ - ढोरपाटन पोष्ट
लाबारिश गर्ल – ५
२०७८ बैशाख ३१, शुक्रबार १८:०१
सवै भन्छन्, प्रेम सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । तर ऊसँगको संगतपछि मलाई लाग्न थाल्यो, संसारमा प्रेमभन्दा पनि ठूलो अरु केहि चिज छ त, त्यो आदत हो । म ऊसको आदतले शिथिल थिएँ, कमजोर थिएँ, पागल थिएँ । कसैलाई पाउने सपनासँग रमाउने आदतले नै रहेछ, मानिसलाई सबैभन्दा बढी कमजोर र लाचार बनाउने । प्रेम पनि एक किसिमको ड्रग्स नै त रहेछ । ऊ मेरो लागि ड्रग्स बनेकी थिई ।
हिजो ऊसँग बोल्नैपर्ने आदत थियो । आज ऊ बिना पनि खुसी हुनैपर्ने आदत बसाल्नु थियो । उसको मिङ्गल प्रोफाइल पिक्चर देखेपछि कुनै कुरालाई हेर्ने मेरो दृष्टिकोण नितान्त फरक हुन थाले । परिवार, आफन्त र साथिभाइहरु साँच्चै आफ्ना हुन् र ? भन्ने आशंका या अविश्वासका प्रश्नहरु बारम्बार मनमा दोहोरिन थाले । कसैसँगको सम्बन्धप्रति विश्वास लाग्नै छाड्यो । मलाई लाग्न थाल्यो, जो कोही पनि कुनै न कुनै स्वास्र्थ बोकेर जीवनमा आउँछन्, केही दिन आफ्नै भएको विश्वास दिलाउँछन्, अनि जीवनभर फेर्नै नसक्ने आदत बसालिदिएर जान्छन् ।
केही दिन त मलाई ऊप्रति बेस्सरी रिस उठ्यो । फोन गरेर उसलाई मज्जाले गाली गर्न पनि मन थियो । तर सकिन । जतिपटक म उसलाई सम्झेँ, उति नै पटक ऊसँग भेट हुँदादेखि अहिलेसम्मका हर कुराहरु दिमागमा घुमिरहे । सोचेँ, जीवनमा संजोगले जो कोहीसँग पनि भेट हुन सक्छ । तर जरुरी यो छैन कि संयोगले भेटिने सबैसँग परिचित हुनैपर्छ र आत्मीय सम्बन्ध कायम गर्नै पर्छ । मेरो दृष्टिकोणमा हाम्रो सम्बन्धका सब कारणहरु उहि नै थिई । पोखराको हरिचोकमा नबोलाएको भए हुन्थ्यो, मेरो नाम नसोधेको भए हुन्थ्यो, फेसबुकमा रिक्वेस्ट नपठाएको भए हुन्थ्यो, मसँग हररात जसो राती अबेरसम्म म्यासेन्जर र फोनमा नबोलेको भए हुन्थ्यो । यि कुरा परै छोडौँ, ‘म अरुभन्दा फरक छु र म उसको लागि खास बनेको छु’ भनेर विश्वास नदिलाएको भए हुन्थ्यो । प्रेम त ऊप्रति पहिलो भेटदेखि नै पलाएको थियो तर यि यथेस्त अरु कारणहरु थिए, मभित्र उप्रतिको प्रेम हुर्कनुमा ।
हुन न त एक किसिमले ऊ प्रतिको मेरो प्रेम पनि साँच्चिकै अजीव थियो । भनिन्छ नि ? एक तर्फी प्रेम । वास्तबमा उसलाई मैले औपचारिक रुपमा प्रेमको प्रश्ताव गरेकै थिएन । यसर्थमा उसलाई दोष दिनु एक किसिमले मेरो मुर्खता थियो सायद । तर एकले अर्कोलाई प्रश्ताव गर्दैमा प्रेम हुने कुरा पनि त थिएन । ऊ मसँग जसरी बोल्थी, मलाई जसरी साथिभन्दा माथिको आत्मियता देखाउँथी, त्यसलाई नै मैले प्रेम सम्झेको पनि हुन सक्छु तर ऊ मेरो जीवनको पहिलो प्रेम थिई । सायद संसारमा आफ्नो पहिलो प्रेमलाई नै अन्तिम प्रेम बनाउने थोरै मात्र भाग्यमानीहरु छन् होला । म त्यो थोरै भाग्यमानी प्रेमीहरुमध्येको एक प्रेमी बन्न सक्छु या सक्दैन, म आफै अन्योलमा थिएँ ।
जब ऊ बद्लिई, मेरा हर कुराहरु पनि बद्लिए । मभित्र पढाइप्रतिको रुची घटेर गयो । क्याम्पस मुस्किलले जान थालेँ । आफै कम बोल्ने मान्छे, झनै कम बोल्न थालेँ । भिड मन पर्नै छोड्यो । जतिसुकै रमाइलो माहोलमा पनि मनमा निराशा नै पैदा हुन थाल्यो । सेन्टिमेन्टल गीतहरु मेरा साथि बन्न थाले । एउटा झ्याल र एउटा ढोकासहितको चारभित्ते बन्द कोठा नै मेरो समय गुजार्ने फेवरेट ठाउँ बन्न पुग्यो । बजारतिर जानैपर्ने काम परे मात्र निस्कन थालेँ । खानामा अरुचि बढेर गयो ।
साथीहरुले ममा आएको परिवर्तनलाई देखेर कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्थे—“आजभोली के भाको छ तँलाई ? क्याम्पस किन रेगुलर छैनस् ?” म आफुलाई केहि नभएको जसो गरी जवाफ दिन्थेँ—“त्यस्तो केहि होइन, बिरामी छु केहि दिनदेखि ।” मेरो जवाफको रहस्य मेरो बोलाइ, हेराइ र अनुहारको भावले प्रष्ट पार्न सक्दैनथे सायद, उनीहरु हो कि होइन कि जस्तो गरेर दोधारमै अल्झेर मौन बस्थे ।
धेरै दिन बितिसकेको थियो हामी बीचमा कुरा नभएको । तर हरपल ऊ मेरो दिमागमा राज गरिरही । ऊ हरपल मेरो सम्झनामा आइरही । ऊसँग फेरी पनि पहिले जसरी बोल्न मन थियो । राती अबेरसम्म, सिरकमुनी, सुस्त आवाजमा फिलिङ्सहरु सेयर गर्न मन थियो । घरको छतमा उभिएर माछापुछ्रे हिमालले पठाएको चिसो सिरोतो खाँदै, आकाशका ताराहरु गन्दै राती अबेरसम्म पहिले जस्तै फोनमा हाँसिमजाक गर्न मन थियो । तर अपशोच, ऊ कसैको संगतमा थिई ।
एक किसिमले त मलाई लागेको थियो, मैले फेसबुकमा राखेको बायो ऊप्रति नै लक्षित हो भन्ने कुरा उसले बुझ्ने छे अनि सहानुभुतिको लागि भएपनि सम्झिने छे । यहि मौका पारेर ऊसलाई मनभरीका बहहरु पोख्न मन थियो । उसलाई प्रश्न गर्न मन थियो, यो सिजनल आत्मियता किन ? उसलाई भन्न मन थियो, सरप्राइज दिँदा दिँदै सक दिन त कोही तिमीबाट सिकोस् । तर ऊ भने उसको जीवनमा म हुनु र नहुनुले कुनै फरक नै पार्दैन जसरी मसँग साँच्चिकै टाढिई ।
बिस्तारै मलाई राती अबेरसम्म फेसबुकमा न्यूज फिडहरु स्क्रोल गरेर बस्ने बानी पर्न थाल्यो । धेरै साथीहरुले फेसबुकमा बोलाउँथे तर मन बिस्तारै म्यासेन्जरबाट टाढा हुन लाग्यो । भन्नु नै पर्दा मैले कसैलाई पनि रिप्लाई गर्न छाँडे । न कसैसँग च्याट, न कसैको फोटो र स्टाटसहरुमा लाइक कमेन्ट । तर पनि फेसबुक भने हरपल चलाईरहेँ ।
ऊसलाई कहिलेकाँही अनलाइनमा देख्थेँ । तर, न उसले बोलाई न मैले बोलाएँ । कुनै बेला लामो समयसम्म ऊ हराउँदा मेरो तर्फबाट म्यासेजका बाढी नै बग्थे उसको लागि । तर आजकल, उसलाई म्यासेन्जरमा बोलाउने हिम्मत नै थिएन । उसको नम्बर मेरो मोबाइलको फोनबुकमा अझै पनि सेभ थियो, तर न त नम्बर डिलिट गर्न सकेँ फोनबाट, न त उसलाई हटाउन सकेँ मनबाट ।
उसलाई फेसबुकमा बोलाउने हिम्मत नभएपनि दिनमा कम्तिमा एक पटक भने म उसको प्रोफाइल खोलेर हेर्थेँ । उसले अmभैसम्म पनि आफ्नो युगल फोटो सहितको प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गरेकी थिइन । कहिलेकाँही अनलाइन देखिनु बाहेक ऊ फेसबुकमा त्यति सक्रिय पनि थिइन । उसका कुनै पनि नयाँ पोस्टहरु थिएनन् । अरु कुरा छोडौँ, युगल फोटो सहितको उसको प्रोफाइल पिक्चरमा साथीहरुले गरेका कुनै पनि कमेन्टमा उसले रियाक्ट र रिप्लाई सम्म गरेकी थिइन ।
दिनहरु जति बुढो हुँदै गए, उसका यादहरु झन बैँश निकालेर मानसपतलमा हरपल सयर गर्न थाले । म खुशी हुनु छ भने उसलाई बिर्सनै पर्छ भन्ने दबाब मन र मस्तिष्कलाई हरेक पल दिइरहेँ । तर अहँ, उसलाई बिर्सन यो मनले पटक्कै मानेन । सुनेको थिएँ, कसैलाई बिर्सनु छ भने मनमा ऊप्रति घृणा जाग्नुपर्छ र घृणा जगाउन उसका नराम्रा पक्षहरुलाई बारम्बार मनमा लिइरहनुपर्छ । तर यो मनले त उसमा नराम्रो केही देखेकै थिएन, खोइ कसरी बिर्सियोस् ? मस्तिष्कमा लेखिएका कुराहरु पो हुन् समयसँगै बिस्तारै खिइने अनि मेटिइने, मनमा लेखिएका कुराहरु त शिलामा खोपिएका अक्षरहरु जत्तिकै जीवन्त रहिरहने रहेछन् । ऊ मेरो लागि शिलालेख जस्तै बनेकी थिई ।
पछिल्ला समयहरुमा ऊ बारम्बार सपनामा आउन थाली । सपना पनि ऊ हो कि होइन कि जस्तो, कहिँकतै, केहि टाढा, अरु कसैसँग हिँडेको, हाँसेको, कुरा गरेको जस्तो । तर कुनै सपनामा पनि उसले मतिर हेरेकी वा मलाई देखेकी हुन्नथी । बारम्बार सपनामा आउन थालेपछि एक पटक त मैले ‘Does it mean anything if you keep seeing the same person in your dream’ टाइप गरेर गुगल सर्च पनि गरेँ । केहि साइकोलोजिष्टहरुको राय थियो, जसको बारेमा बढी सोचिन्छ या जुन व्यक्तिसँग आफ्नो भावना र चाहनाहरु आदान प्रदान गर्न मन छ, त्यहि व्यक्ति नै सपनामा बारम्बार आउने गर्छ । यो कुरामा त म यकिन भएँ कि साइकोलोजिष्टहरुले भनेको जस्तै बिर्सन खोज्ने बहानामा होस् या सम्झन खोज्ने बहानामा होस्, ऊ हरपल मेरो मानसपतलमा राज गरिरहेकी थिई । र त ऊ बारम्बार सपनामा आइरही ।
जसलाई बिर्सने प्रयास गरिरहेको छु, ऊ नै बारम्बार सपनामा आउन थालेपछि म डिप्रेसनमा जाँदै छु, भन्ने पनि लाग्दै थियो । तर मैले उसलाई जसरी पनि बिर्सनै पर्छ भन्ने दबाब दिमागमा भने हरपल दिइरहेँ । यो दबाबले म झन फरक फरक कुराहरुबाट निर्देशित हुँदै गएँ । मभित्र जे भइरहेको छ, त्यो कुनै पनि हालतमा सहि भइरहेको छैन भन्ने पनि थाहा थियो । तर दिमाग मनबाट निर्देशित थियो । उसलाई भुल्ने बहानाले पछिल्ला दिनहरुमा मभित्र नराम्रो लतप्रतिको चाहा बढ्दै गयो । ऊसलाई बिर्सनै पर्छ भन्ने दबाबले मलाई झन गाल्दै थियो । दिनहरु झन कठोर बन्दै गए ।
त्यसपछिको केहि महिनाहरु मेरा लागि सबैभन्दा कठोर रहे । एक किसिमले भनौँ न म मनैदेखि मरिसकेको थिएँ । साथीभाइहरुसँगको रमाइलो माहोलमा मात्र पिउने आदत भएको ममा यति परिवर्तन भयो कि म रक्सी नभइ नहुने एडिक्ट नै भएँ । डेरा नजिकैको भट्टी पसल मेरो पर्सलन हेलिकन बन्न थाल्यो । भट्टीमा बसेर बेलुकी अबेरसम्म पिउनु, लरखराउँदै साँघुरो गल्ली छिरेर डेरामा पुग्नु, सिरानी नजिकै मोबाइलमा सेन्टिमेन्टल गीतहरु बजाएर बेहोसीमा सुत्नु अनि बेलुकीको ह्याङ ओभरले बिहान अबेरसम्म पनि ओछ्यानबाट नउठ्नु मेरो दैनिकी जस्तै बन्न थाल्यो ।
सधैँजस्तो एक साँझ म भट्टीमा बसेर पिउँदै थिएँ । पियक्कडहरुको केही झुण्डहरु अरु टेबलमा पनि थिए । उनीहरु चर्को आवाजमा हाँसिमजाकका साथमा गफमा तल्लिन थिए । भट्टिमा आएका ग्राहकहरुको चर्को भिडमा सल्केका चुरोटको धुवाँ मनसुन सिजनमा लागेको कुइरो जस्तै बन्द कोठामा मडारिएको थियो । चुरोटको धुवाँले दृश्य अस्पष्ट थियो । सायद घडीमा नौ बज्दै थियो, केही परको टेबलमा भएका २ समूहबीचमा विवाद शुरु हुन थाल्यो । पसलको दाइले शान्त हुन अनुरोध गरिरहनुभयो, तर झगडाले झन उग्र रुप लिन थाल्यो । म कुनाको एक टेबलमा बसेर एक तमासले यो दृश्य हेरिरहेको थिएँ ।
अश्चानक ! म बसेको टेबलको ठीक पछाडिको भित्तामा एउटा बियरको बोतल आएर बजारियो । त्यो बोतल ति दुई समूहमध्ये एकले फ्याँकेको बोतल थियो । बोतल फुटेर उछिट्टिएको एक टुक्रा मेरो निधारभन्दा केहि माथि आएर लाग्यो । मलाई केही चिजले च्वास्स बिझाएजस्तो गर्नु बाहेक त्यस्तो दुखेको भान त भएन । तर जब मेरो हात टाउकोमा गयो, तब तातो तरल पदार्थ लागेको जस्तो अनुभव भयो । हात हेर्दा हातभरी रगत लागेको थियो । केहीबेरमै मेरो अनुहार नै नचिनिने गरी रगत बग्न थाल्यो । मैले दायाँ हातको हत्केलाले दबाएर रगत बग्न नदिन भरपुर प्रयास गरेँ तर रक्तस्राव रोकिन मानेन ।
केहीबेरमै टोलमा हल्लाखल्ला सुरु भयो । झगडा गर्ने केटाहरु भागाभाग गर्न थाले । सायद, कसैले प्रहरीलाई खबर गरेको थियो, केहीबेरमा प्रहरी आयो । प्रहरीले ४ जना केटाहरुलाई भट्टिबाट भाग्न नपाउँदै समात्यो । झगडा गर्ने समूहमा म आफु नभएको जिकिर गर्दा गर्दै पनि प्रहरीले पसलको साहुसँगै मलाई पनि टुडिखेलस्थित बगर प्रहरी चौकीमा पु¥यायो । मेरो टाउकोको चोटबाट रगत अझै बगिरहेको थियो । अत्यधिक रक्तस्रापले मलाई रिँगता लाग्ला जस्तो भैरहेको थियो ।
केही बेर घटनाको बारेमा सोधपुछ गरेपछि मेडिकल रिपोर्टको लागि हामीलाई गण्डकी अस्पताल पु¥याइयो । झगडामा प्रत्यक्ष सामेल भएका ति केटाहरुलाई प्रहरीले पुनः चौकीमा फिर्ता लियो । भट्टी पसलको दाइ र झगडा गर्ने समूहका केटाहरुको वयानको आधारमा मलाई निर्दोष सावित गरियो । मेरो चोटको चेकजाँच पछि स्टिच गर्नुपर्ने भयो । केही गहिरो चोट लागेको र रक्तश्राव बढी भएकोले त्यो रात म अस्पतालमै बस्नुपर्ने भयो ।
एक रातको अस्पताल बसाई पछि मलाई बिहानै डिस्चार्ज हुनु थियो । डिस्चार्ज अघि मेरो स्वास्थ्य स्थितीको बारेमा डक्टरहरुसँग सामान्य छलफल भयो । उहाँहरुले मलाई धुमपान र मद्यपानको आदतको बारेमा सोध्नुभयो । मैले नढाँटी सवै कुराको बेलिविस्तार लगाएँ । पहिले पहिले कहिलेकाहीँ मात्र रक्सी पिउने गरेको मैले ४/५ महिना यता नियमित नै रक्सी पिउने आदत बसेको कुरा पनि बताएँ । उहाँहरुको अनुसार अत्यधिक रक्सी सेवन कै कारण रगतमा हुने प्लेटलेट्स घटेको र पातलो भएको कारण अत्यधिक रक्तश्राप भएको कुरा बताउनुभयो । साथै मेरो कलेजो पनि केही सुन्निएको कारण तत्काल रक्सीको आदत छोड्न अनुरोध गर्नुभयो ।
त्यसपछि डक्टरहरुको निर्देशन बमोजिमका केही औषधिहरु क्लिनिकबाट किनेँ अनि ट्याक्सी चढेर बगर प्रहरी चौकीतिर हानिएँ । कारण, मेरो उपचारमा लागेको सम्पूर्ण खर्च बेलुकी झगडा गर्ने समूहबाट असुल गर्नुपर्ने गरी प्रहरीले छलफल अघि बढाएको थियो । ट्याक्सी अस्पताल चोक, रानीपौवा, फुलबारी हुँदै महेन्द्रपुलतिर सुइकिदै थियो । टाउकोमा लागेको चोटले भन्दा पनि आफूले गरेको गल्तिले मन दुखाइरहेको थियो । अवदेखि रक्सी र चुरोट छुँदै छुन्न भन्ने अठोट पनि मनभित्र पलाउँदै थियो । डक्टरको अनुसार केही ढिला भएको भए समस्या जटिल बन्न सक्थ्यो । ट्याक्सीको गतिसँगै मनभित्रबाट झगडा गर्ने समूहप्रति पनि आभाररुपी भावहरुको तरङ्ग पनि बढ्दै गयो, उनीहरुकै कारण रक्सी आदतले निम्ताएको मेरो स्वास्थ्य समस्या पत्ता जो लागेको थियो ।
केहीबेर मै म बगर प्रहरी चौकी पुगेँ । चौकीमा झगडा गर्ने समूहका केटाहरु र उनीहरुका अभिभावक तथा आफन्तहरु उपस्थित थिए । म जाँदा बित्तिकै भट्टी पसलको दाइले मेरो स्वास्थ्य अवस्था बारे सोध्नुभयो । मैले केही ठीक भइसकेको कुरा बताएँ । हुटको टोपीले छोपेको, सेतो पट्टी बाँधिएको मेरो टाउको देखाउन प्रहरी चौकीका मुद्दा फाँटका प्रहरी कर्मचारीले आग्रह गर्नुभयो । मैले विस्तारै टोपी खोलेर टाउको देखाएँ । मलाई हल्का टाउको दुखिरहेको थियो, रिँगता लाग्ला जस्तो पनि गरिरहेको थियो । साथै टाउकोको चोटले अनुहार केही सुन्निएको थियो ।
केही घण्टाको छलफल पछि हामीहरु बिचमा विगतमा पनि कुनै दुस्मनी नभएको, अहिले पनि कुनै दुस्मनी नरहेको र यो घटना केवल भवितव्य भएको भनि कागजात गरियो । मेरो उपचारको सम्पूर्ण खर्च उनीहरुबाटै बेहोरियो । एउटा मानवीय नाताले पनि मैले यि कुराहरुमा सहमति जनाउनै पथ्र्यो, र मैले त्यसै गरेँ पनि । मेलमिलाप सकिएपछि म आफ्नो डेरातिर जाने केही ओरालो बाटोतर्फ झर्दै थिएँ । यसै त पोखराको मौसमको भरै हुँदैन । आकाश कालोनिलो भएर गर्जदैँ थियो । भनौँ न, पानी चुहिन मात्र बाँकी थियो । चौकीदेखि डेरासम्म केही मिनेट मात्रैको दुरी भएपनि मलाई सकेसम्म छिटो पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो । असहज स्वास्थ्य अवस्था हुँदाहुँदै पनि मेरा पाइलाहरु सामान्यभन्दा तिब्र चालमा थिए ।
अश्चानक ! पछाडितिरबाट कसैले केही अजीव पाराले हर्न बजायो, यसो पछि फर्केर हेरेँ । एउटी केटी स्कुटरमा आएर मेरो बायाँ छेउतिर रोकिई । स्कुटर रोक्दारोक्दै उसले मतिर फर्केर भनी, “हजुरलाई हिन्न गाह्रो भयो होला, म पु¥याइदिम् ?” म अक्न न बक्क हुँदै उसलाई हेरेँ । हेलमेट, कालो चस्मा र मास्कले उसको पुरै अनुहार छोपिएको थियो । म अन्योलतामा परेजस्तै गरि औषधिको पोलिथिन बोकेको हातले मेरो डेरा जाने गल्लीतिर इसारा गरेजस्तो गरी भनेँ, “नाइ, रुम यहीँ नजिकै छ । पर्दैन ।” उसले स्कुटर अफ गरी अनि स्कुटरमै बसेर हेलमेटको लक खोल्दै फेरी बोली, “हजुरलाई गाह्रो लाग्दैन भने के म हजुरसँग केही बेर कुरा गर्न सक्छु ?”
म उसको यो दोस्रो प्रश्नले अझै अन्योलमा परेँ र अन्यालतामै मुन्टो हल्लाए जस्तो गरि बोलेँ, “हुन्छ, के कुरा ? भन्नु न ।” “हया्ँ हैन । कतै प्राइभेट ठाउँमा । अम्……..क्याफेमा जाउँ, हुँदैन ।” उसले यति कुरा बोलेर प्रश्न गरिसक्दा हेलमेट, चस्मा र मास्क हटाइसकेकी थिई ।
यतिखेर एउटा बाटुलो र गहुँगोरो युवतीको अनुहार मेरो अगाडि उभिएको थियो । त्यो अनुहार अरु कोही नभएर केहिबेर अघि मात्र प्रहरी चौकीमा देखेको अनुहार थियो । सायद त्यो अनुहार झगडा गर्ने समूहमध्ये कसैको आफन्त बनेर आएको अनुहार थियो, जसलाई मैले छलफल भरी केही पर मौन बसेको मात्र देखेको थिएँ । प्रहरी चौकीमा दुरीको हिसाबले ऊ मदेखि टाढा थिई तर दिशाको हिसाबले मेरो ठीक अगाडि थिई । उसले छलफल भरी नै मोबाइल हेरीरही तर बेलबेलामा मलाई चिने जस्तै गरी हेर्ने पनि गरेकी थिई । त्यो बेला जतिपटक मतिर हेर्थी, केही हाँस्न खोजेजस्तो, केही उत्सुक भए जस्तो, केही नर्भस भए जस्तो भाव उसको अनुहारमा देखिन्थ्यो । मेरो मगजले यतिसम्मको मात्र स्मरण गर्न सक्यो त्यो क्षणमा ।
मैले यति कुरा स्मरण गरिरहँदा उसले मलाई नै हेरिरहेकी थिई । अब त मलाई प्रहरीचौकीमा मिलापत्र भइसकेपनि किन पिछा गरिरहेकी छ ? भन्ने कुराले पो सताउन थाल्यो । केही त्रास, केही उत्सुकताको साथमा उसले भनेको ठाऊँमा जान म राजी भएँ । उसले स्कुटर स्टार्ट गर्दै मलाई बस्न सङ्केत गरी । म उसको पछि बसेँ । उसले आफ्नो स्कुटर ट्याक्सीचोक हुँदै नदिपुरतिर हुँइकाई ।
केहीबेरमा हामी महेन्द्रपुलको एउटा क्याफेमा छि¥यौँ । क्याफे लगभग लगभग खाली नै थियो । हामी बाहिरको वातावरण प्रष्ट देखिने गरि झ्यालतिरको टेवलमा गएर सम्मुख भएर बस्यौँ । उसले २ वटा कालो कफी अर्डर गरी, जिन्सबाट मोबाइल झिकेर टेबलमा राखी अनि मलाई हेर्दै भनी, “अरु केही खाने ?”
मैले खानामा रुची नभएको कुरा जनाउँदै उसलाई कुरा शुरु गर्न अनुरोध गरेँ । ऊ केहि असजिलो पारामा बोली, “दाइहरुको गल्तिको लागि……..आइ एम सरी !” उसको यो बोलीपछि मनले केही राहतको महसुस ग¥यो अनि केही हाँसेजस्तो गरी केही अङ्ग्रेजी केही नेपाली भाषा प्रयोग गरी उसलाई हेर्दै भनेँ, “इट्स ओके ! मैले माइन्ड गरेको छैन । यति सानो कुरा त माथि नै भन्या भा हुन्थ्यो नि, किन ह्याँ सम्म ?” ऊ पनि हाँस्दै “थ्याङ्कस फर कमिङ” भनी ।
त्यसपछि हामी बिचमा सामान्य परिचय भयो । ऊसले आफ्नो नाम खुशी थापा र ठेगाना नदिपुर बताई । उसले भर्खरै प्लस टु उत्तीर्ण गरेकी रहिछ । साथै, बेलुकी झगडा गर्ने टोलीमा उसको आफ्नो दाइ पनि रहेछ । मैले पनि आफ्नो बारेमा धेरथोर कुराहरु परिचय स्वरुप बताएँ ।
यति कुरा गरिसक्दा कफी हाम्रो टेवलमा आइसकेको थियो । हामीले कफिको पहिलो चुस्की लिँदै थियौँ । बाहिर एक्कासी ह्वार्र पानी प¥यो । उसले आफ्नो कफि टेवलमा राखी अनि झ्यालबाट बाहिर हेर्दै भनी, “आहा ! बाहिर हेर्नु न ?” मैले पनि उसले भने बमोजिम नजादिँदो पारामा बाहिर हेरेँ । उसले तुरुन्तै मलाई हेर्दै प्रश्न गरी, “हजुरलाई वर्षा कत्तिको मन पर्छ ?”
उसको यो प्रश्नले मन एकैचोटी भारी भएर आयो । कमसेकम हिजो भट्टीमा पिउन शुरु गरेदेखि अस्पताल, प्रहरी चौकी हुँदै अहिले भर्खरै मात्रको कफिको चुस्की सम्म त मलाई ‘वर्षा’को याद आएको थिएन । तर यो उसको यस्तो प्रश्न थियो कि अबदेखि त म हरेक झरीमा उसलाई देख्नैपर्ने, सम्झनैपर्ने नियतिबाट गुज्रिन्छु होला जस्तो लाग्न थाल्यो । मनमा अनेकौँ तर्क र वितर्कहरुको मन्थन चल्दाचल्दै मैले निरासाको बादल मडारिएको अनुहार लिएर हाँस्न खोजेजसो गरी एउटा शब्द निकालेँ, “ठीकै ।”
मेरो एक शब्दपछि उसले मलाई निरास मुद्रामा एक तमासले हेरिरही । मेरो अनुहारमा पीडा देखिनु स्वाभाविक थियो । तर भर्खरै मात्र बाहिर झरी पर्दा उत्साहित हुने खुशी, एकैचोटी दुःखी भावमा प्रस्तुत भई । म यताउती हेरे जस्तो गरी असहज मान्दै कफिको कप समात्न खोजेँ । यतिखेर मेरा हातहरु थरथराइरहेका थिए । जसै मेरो हात कफि कपमा पुग्दै थियो उसले बिचैमा आफ्ना दुवै हातले माथिबाट मेरो हातलाई छोपेर, एकतमासले मलाई हेरी अनि गला भासिएको जस्तो आवाजमा सोधी, “अनि वर्षा लामिछाने नि ? यानकी लाबारिश गर्ल ?”
प्रेस संगठन नेपाल बागलुङको भिडियो कन्फ्रेन्स बैठक : कोरोना संकटमा हेल्प डेस्क निर्माण गरिने